-Uummatni keenya bilisummaa gonfachuuf qabsoo haadhaawaa kara hidhannoo fi karaa maraan adeemsisuun barbaachisaa akka ta'ee fi waldhaanson akkasiis dirqamaa fi mirga ilmaan oromoo ta'uu beekuudhaan:
-Qabsoo Bilisummaa Oromoo kan Tasgabbii, Bilisummaa, Dimokraasii, mirga dhala namaa fi heeraaf seera kabajamuu, guddinaa fi
Mirga Hiree ofii ofiin Murteeffannaa Ummata Oromoo fi kan biroo bakkaan gahuuf qabsaa'anu waliinis hojjechuuf
hundeffame. Erga hundefame irraa kaasse qabsoo Adda billisummaa Oromoo(ABO) dhaan biyya Oromiyyaa kessatti geggeeffamu irratti qoda fudhacuudhaan, waggoota dheeraaf QBO kessatti dirqamasaa bahe jira bahuttis jira.
Ummatni Oromoo, Moottumoota Habashotaatin eerga gabroome irraa kaase, gabrummaa kana fudhachu didudhaan wareegama Lubbuu, dhiigaa fi Lafee Oromoota heedduu kan irratti kaffalame, qabsoo haadhooftuu gaggeessee jira. Ammas geggeessutti jira.
Bara Miniliik irraa kaase, haamma amaatti bittoota Empaayerichaa irraa waan ummata Oromoof foyya’ee hinjiru. Haata’u malee bu’aa qabsoo kana irraa argameen Ummatni Oromoo yeroo kamiyyu caalaa dammaqee fi ofbare, sabbonummaan ammas Abba Biyyumasaatiif qabsaa’uutti jira.
Waggoota 27 darban keessa gochoota suukannessaa kana hinjedhamne ajjeechaa, reebicha, saamiinsaa fi lafa ofi irraa buqqa’uun walirraa utu hin citiin haalkaniif guyyaa motummaa Abbaa Irree TPLF/ EPRDFin ummata Oromoorratti raawwatamaa ture.
Qabsoo fi Wareegama haadhaa’aa Qeerroo fi ummata Oromoodhaan geggeffameen, Motummaa Abbaa Irree kana angoorraa fonqolchuu fi ummata Oromoo bilisomsuuf gahame jira.
Haata’u malee bu’aan qabsoo kanaa Qaama hundeffama isaa irraa kaasee Farra QBO fi jala bultuu TPLF kan ture fi yakka ummata Oromoo irratti raawwachaa fi raawwachiisa turen buutamee, akka Oromiyaan bilisoomte fakkese of faarsutti jira.
Oromoon ammas giddugalessa, Kibba, Bahaa fi Dhiha Oromiyaatti ajjeffamaa fi Hiidhamaa jira. Motummaan Hiriiraafi kessummoota simachuuf, akkasumas do’iilee adda addaa fakkeessani hojjechuuf yeroo baayyee qabu kuni, sagalee ummata oromoo Haararge Cinaksanitti, Baaleefi Borana, akkasumas Wallagaatti haalkanif guyyaatti waraana Abdi Illey fi Poliisii Addaa Oromiyaan ajjeffamaa jiruuf gurraa kennu dide jira.
OPDOn yakka waggoota 27 darban TPLF wolin ta’uudhaan Ummata Oromoorratti erga raawwachaa turte booda, Qabsoo Qeerroo fi sababa rakkoo malaamaltummaa isaan lamaan gidduutti umameen akka fuulashe gara ummataa garagalchite fakkessite malee ammas kaayyoo durii akka geggeessaa jirtu, gochaale dhihoo kana Goodinaale Oromiyaa garaa garaa keessatti rawwatamaa jirantu ragaa nu baha. (Cinaaksan, Abdi Illey, Borana, Baale, Dambi Dolloo) kkf.
Kanaaf OPDOn yoomu Ummata Oromoo bakka bu’uu hin dandeessu,Ummata Oromodhaanis hin filatamne.
Qabsaa’oota Oromoo hedduun kan wareegaman saba Oromoo bilisa baasanii, Abbaa Biyyummaa ofi mirkaneffachuuf malee, haabshoota waliin Aangoo walqoodani Itophiyummaa dagaagsuuf miti.Qabsaa’otni Oromoo Lakkoofsi isaani hin beekamne Lubbu isaani kan wareegan Empayeera Itophiyaa ijaaruf utu hin taane Sabboonumaan dagaage Ummatni Oromoo Enyumaa isaatin boone akka jiraatu.Wanti yeroo ammaa demaa jiru garu Namoota waggaa dheraaf qabsoo Oromoof jeedhani dararaman biyya keessaa fi biyya Alaa deemani dadhabsiisun Qabsoon Oromoo akka dadhabdu fi Sirni duuri akka deebi’u irratti dalagamaa jira.
Oromoon sabaaf sablammoota Oromiyaa kessatti argamanii fi Ollaa Oromoo ta’aan, wojjin haariiroo gaari, walitti dhufeenya kara nagaa fi dantaa wal qixxummaarratti kan hundaa’ee ni feedha. Qabsoo bilissummaa saanif gaggeessan ni deggara.
Haanga hara’atti sabaaf Sablamoonni biraa rakko tokko male Oromiyaa keessa jiraachaa jiru gara fulduraattis ni jiraatu.Haata’u male yeroo ammaa kana jeecha “Medemer” jeedhun sabaaf sablamoonni Itoophiyaa keessa jiran tokkumaa Itophiyaa ijaaru irratti akka yaadan godhamaa jira. Kun Ummata Oromoof Bu’aa inni fiidu tokko hin jiru.Oromoon Afaan,aadaa,Dudhaa fi Abbaa biyyumaan isaa kabajamee,lafa isaa irraa utu hin buqa’iin nagaan sabaaf sablamoota biraa waliin jiraachu feedha male akka kanaan duraa maqaa tokkumaatin cunqursame aadaa fi seenaa isaa awwaalu hin feedhu.
1.Qabsoo Qeerrootiin motummaa diigamuuf gahe lubbuu baraaruuf jeecha namoota seeraan ala waggoota dheeraaf hiidhamani fi dararamani kan turan hiikun galata kan qabu qabsoo Qeerrooti male kan Motummaa EPRDF miti.
2.Ajjeechaa, hidhaa fi saamicha qabeenya oromiyaa kessatti OPDO fi Liyyu Poliisiin raawwatama jiru hatattamaan haadhaabatu.
3.Namoota mana Hiidhaa kessatti dararamani bahaaniif beenya madaalawaa akka kaffalamuuf ni gaafanna.
4.Jaal Nadhii Gammadaa fi A/G Dabbasaa Guyyoo dabalatee, hoogantoota sababa QBOtiin motummaa wayyaaneettin bakka bu’een isaani dhabame fi hiidhaakessatti argaman hatattaman akka hiikaman
5.Empaayera Ithophiyaa jedhamtu kana keessatti yoomiyyu Oromoon Murtii haaqaa argate hinbeeku waan ta’eef, ittigaafatamtootni Mootummaa Wayyaane yakka Oromoorratti raawaatani fi gargaartootni isaani hatattaman to’annaa jala oolani mana Murtii Idilee Adunyaatti dhihaatani akka gaafataman.
6.Motummaan shoroorkessituudha jedhe of amane kuni, biyya bulchuu utu hinta’iin mana Seeraatti dhihaachu qaba.
7.Lubbu Oromoo amma Godinaale Oromiyaa Garaagaraa keessatti galaafatamaa jiruuf OPDO tu itti gaafatama
8.Ajjeechaa Sukkanessaa Dambidollo Keessatti Haadha Dahumsaaf Mana Yaalaa demaa jirtu irratti raawatame ni Balaallefanna.Shororkeesitootni goocha kana raawatan haattatamaan murteetti haa dhiyaatani.
9.Daangaan Oromiyaa haakabajamu
10.Sababi Saamicha lafaa fi Dadhabbi buulchinsa Mottumaa kanaatin Sabni Oromoo Dangaa fi Qe’ee isaa irraa Buqa’ee haattatamaan gara Qe’ee isaatti Haa deebi’uu.Sababi Buqa’insaan waan jalaa barbadaa’ee fi faayyidaa hanga yonaa lafa sanarraa aargachu malu yaadame haattatamaan Beenyaan haa kanfalamuuf.
11.Oromoon ajjeffamaa utu jiru,gaaffii fi akkeekni qabsoo Bilisummaa Oromoo deebii utu hinargatin, akka biyyi Oromiyaa bilisoomteetti fakkessani Jaarmiyaale fi Aktivistootni Oromoo gara biyya Itophiyaa galuun, murte sardamaa dha jenna.
Haata’u malee fedhii keessan kabajaa, motummaa yakkamaa fi tortore uumurii dheereffachuuf tattaafatu kana gargaaru dhiistanii, ummata dammaqsuu, kakaasuu fi goocha sukannessaa motummaa kanaa saaxila baasurratti akka hojjetan waamicha keenya sini dabarsiina.
12.Kayyoo isa ganamaa kan Abbaa Biyyuummaa Oromoo Mirkanessu fi Qabsoo xumuraa geggeessuuf akka murannoo fi tokkummaan kaanu dhaamsa Oromoo hundaaf dabarsina.
Oromoon araada hinqabu, yo jiraatees Oromummaasaati!
Yeroo jiraannuus yeroo dunuus Oromoodha nuyi!
TBOJ/UOSG- Adolessaa, 21. 2018
Union of Oromo student in Europe-Germany (UOSG) is a students organization based in Germany. Founded in 1974 in Germany and has members throughout Germany, Europe and Ethiopia.
tel: 0049 152138026024